Ivenkile yeApple ivaliwe! Inqaku eliphambili leWWDC 2017 lisondele | Ndisuka mac
U-Apple uvale nje iVenkile yeApple njengesiqhelo kwiiyure ezimbalwa ukusuka kumnyhadala omtsha kwaye kule meko yinkcazo ephambili yeWWDC. Ke ukusukela ngoku akunakwenzeka ukuba uthenge nantoni na kwivenkile ekwi-Intanethi yenkampani ide iphele intetho. Siza kubona ukuba abafana baseCupertino basothuse ngeli xesha, kodwa Kuyamangalisa ukuba bathi baya kuvula kwakhona ukusuka nge-16: 01. Le poster inokuba ingalunganga.
Ngayiphi na imeko, ngaba siza kubona ukuhanjiswa kweMac Pro entsha? Ngaba baya kuyivelisa i-10,5-intshi ye-iPad Pro? Isithethi kunye noSiri? IiMacBooks ezintsha? Sinokubona kuphela uhlaziyo kwiinkqubo zokusebenza zika-Apple kunye nohlaziyo olunengqiqo kuluhlu lonke lweencwadana, kodwa into ecacileyo yile Kusele into encinci kakhulu ukufumanisa.
Amarhe ngazo zonke ezi mveliso zintsha zehardware anokuba ngamarhe nje kunye ne "hype" yabanye abasebenzisi abashiyeke bengakhange babonise okokuqala kwenkampani ngoMatshi ophelileyo. U-Apple ushiye inqaku eliphambili ngasemva lokumilisela i-iPad entsha ngohlaziyo kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo, yiyo loo nto uninzi lwabasebenzisi beqinisekile ukuba iApple iza kuzisa iimveliso ezintsha kule ntetho iphambili. Kodwa kufuneka sigcine iinyawo zethu emhlabeni kwaye iWWDC yinkomfa yabaphuhlisi, isoftware, njalo Akucaci ukuba kufuneka sibone iimveliso zekhompyuter ezintsha ngaphandle kwamarhe.
Okwangoku, ivenkile ekwi-Intanethi sele ibonisa i Uphawu "Sizobuya ngoku" Kwaye nje ukuba intetho ephambili yale WWDC igqityiwe, siza kuyiphonononga sikhangela iimveliso ezinokubakho -ngakumbi iiMacBooks- nangona bengazivezi ngqo kwigama eliphambili, kunokwenzeka ukuba bakhululwe njengohlaziyo njengesiqhelo xa besongeza iiprosesa ezintsha kwiikhompyuter zabo, "Ukuhlaziya okungathethiyo". Kuncinci ukuphuma kwintandabuzo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ivenkile yeApple ivaliwe! Inqaku eliphambili leWWDC 2017 lisondele
Iifilitha zeProint Pro Art, zihlaziywa nge icon entsha kunye nokulungiswa